Ukhetho lwam lweencwadi zonyaka. Uphononongo | Uncwadi lweNdaba
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Amabali
2021 iphela. Omnye unyaka wokufunda, ngaphantsi kunokuba wawunokubakho, kodwa usoloko uyimfuneko. Nangona kunjalo, inokuba yintanga yam, kodwa ngoku ixeshana ngoku umnwe wam kwi-tablet kunye nezandla zam ephepheni azingcangcazeli xa ndiyiqalile kwaye ayikhange indiqinisekise. Ngaphambi kokuba ndenze umzamo kwaye ndiyigqibe. Ndiyazi ukuba kunjani ukubhala incwadi kunye neeyure kunye nenkqubo enzima yokuvelisa kunye nokukhuthaza ukuyifumana kumfundi. Kodwa ngoku ... Nangona kunjalo, oko kuthethiweyo, kuya kuba bubudala kwaye kwakhona uyazi ukuba akuyi kubakho ixesha eliphathekayo lokufunda yonke into oyithandayo. Olu khetho lweencwadi lolomntu kuphela, ukuze kucace, kodwa ndiya kuphinda ndiqaqambise ezinye ezimbalwa ezithunyelwe ngaphambili. Ndiyathemba ukuba unyaka ozayo uya kuqhubeka usiphathela amabali amnandi. Wonwabile u-2022!
Okokuqala yitsho, enkosi kwabachachileyo incwadi Fair Ukusuka eMadrid, Ndakwazi ukubulisa nokuvuyisa abanye balaba babhali kula mabali akhethiweyo, afana noDomingo Villar, uDaniel Martín Serrano okanye u-Iñaki Biggi.
2 Ukukhankanywa okhethekileyo
3 Kwaye uManuel Bianquetti
Ubukumkani -UJo Nesbø
Nguwo iwonga lamazwe ngamazwe endihlala nalo. Akumangalisi, kuba iparishi eqhelekileyo endifundayo iyazi ukusuka kude ukuba uJo Nesbø bubuthathaka bam.
Insomnio -UDaniel Martin Serrano
Nantsi ke isihloko sesizwe endisigqamisayo walo nyaka. Isiqalo kwinoveli - hayi yoncwadi - yalo mbhali wesikrini, umbhali kunye notitshala ongakhange akwazi ukwenza iqalo elingcono.
Umdaniso wegeza -Victoria Mas
Ndine-non-venal edition njengesipho esivela kumhlobo kwaye ndayithatha ngenye imva kwemini. Ngokungaqhelekanga inoveli yombhali ongumFrentshi uVictoria Mas echukumise intliziyo yam kwaye Bendincoma unyaka wonke. Ngenxa yamandla akhe, ukugxeka kwakhe kunye nomfanekiso wakhe wentlalo wexesha.
Ayizizo iindaba ukuba into ebhalwa nguDomingo Villar ilungile, ngohlobo lwenoveli enamaphepha angama-600 okanye iindaba ezinje. Ngemizekeliso ebalaseleyo njengabahlobo kuphela abanokuthi bakwenzele kona, umphumo ube lufundo lwasemva kwemini oluzalisa ngawe. iphupha, imvakalelo kunye nostalgia.
Ukufa ngoNovemba - UGuillermo Galván
A UCarlos Lombardi, UGuillermo Galván, owayesakuba lipolisa wajika waba ngumcuphi emva kwemfazwe yaseMadrid, ndadibana naye kulo nyaka uphelileyo ndamthanda. Eli bali lesithathu linayo. Kwaye ngaphezu kwezicwangciso zayo, le trilogy ihluke kum ngenxa yayo ukusetwa okugqwesileyo yaloo Madrid yamashumi amane kunye isimbo ubutyebi ekubhaleni kwakho.
Blacksad 6. Yonke into iyawa, inxalenye enye - UJuanjo Guarnido kunye noJuan Díaz Canales
Iminyaka engamashumi amabini sithandana nolu ngcelele lwenoveli enemifanekiso-ezinezihloko ezi-6 kuphela-kunye nomcuphi obalaseleyo njengoko esothusa. UJohn blacksad, ukuba umlinganiswa omkhulu wekati emnyama anthropomorphic. Ibali lakhe lesithandathu alidanisi kwaye i-22 iza kusiphathela ifandesi yakhe.
Iprojekthi kaMoses - Iñaki Biggi
Unyaka ndawuqala naye and ndandingenokwazi ukwenza ngcono. Imbeko enkulu evela kulo mbhali waseSan Sebastian ukuya kuloo mabali efilim emfazwe asetwe kwiNdebe yeHlabathi yesiBini enezihloko ezinjengezi. Ishumi elinesibini ukusuka emthini (esona salathisi sakho sicacileyo) okanye Iindlela zeNavarone.
Inkwenkwe eneentsimbi - Pere Cervantes
Eshukumayo kwaye ihlala ngexesha elinye le noveli ene Umfanekiso omangalisayo weBarcelona emva kwemfazwe, kunye nentlawulo kwi-cinema, i-protagonist enkulu kunye neyona nto ilungileyo kunye neyona imbi kakhulu yodidi.
Kwaye uManuel Bianquetti
Ewe kunjalo. Kufunyenwe into yokuba ndiyifunde Ukuhamba kofudo y Intlungu kajongilanga kwaye ufumane i-protagonist yayo, uManuel Bianquetti omkhulu ngayo yonke ingqiqo eyenziwe nguBenito Olmo. Funda (okanye endaweni yokutyiwa) kwisithuba esingaphezulu kweveki, uBianquetti uye wakhasa kolu luhlu lukhethekileyo lwabalinganiswa bohlobo oluthathwa ngoko nangoko. iqhekeza lentliziyo yam emnyama. Nakulo nyaka ndizifundile iindaba zakho, Ubomvu omkhulu, kunye nomnye umlinganiswa onomdla. Kodwa ngokuqinisekileyo ndihlala noBianquetti.
Kwakhona, eyona nto ingcono kakhulu ndikwazile ukukuxelela ngokobuqu a UBenito Olmo kwaye niyazi into eya kubakho Inguqulelo yefilimu esele ikwimveliso kunye nesamente ethi, ewe, ibethe ubuncinci i-iconography endiyicingelayo ngokufanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Ukhetho lwam lweencwadi zonyaka. Uphononongo
Ibhalwa njani incwadi kwaye uyipapashe